Ronaldo oo 300 oo gool u dhaliyay R Madrid - BBC News Somali
Ronaldo oo 300 oo gool u dhaliyay R Madrid
Image caption Ronaldo labo ciyaartooy oo kali ah ayaa ka galoolal badan kooxda Real Madrid
Christiano Ronaldo, ayaa u dhaliyay kooxdiisa Real Madrid goolkiisii 300-aad markii ay Real Madrid ka badisay xalay kooxda Rayo Vallecano, iyagoo afar dhibcood ay kooxdiisa weli ka hooseyso kooxda hogaanka haysa ee Barcelona.
Real Madrid ayaa u mahadcelisay goolhaye Iker Casillas, maadaama laga cayaar wanaagsanaa kooxda qaybtii hore ee cayaarta, isagana uu badbaadiyay weerarro lagu soo qaaday goolka.
Ronaldo, ayaa goolka hore ee Real ku dhaliyay madaxa ka hor intii uusan James Rodriguez gool labaad u dhalin Real Madrid.
Goolashan 300-da boqol ah ayaa Ronaldo 41 ka mid ah waxa uu ku dhaliyay madaxa, 55 waxay ahaayeen rigoorayaal, 46 gool bannaanka diilinta sided iyo tobanaad ayuu ka dhaliyay, halka 158 uu ka dhaliyay gudaha xariiqa ku wareegsan goolka.
Cayaaryahanka u dhashay Boortaqiiska wuxuu 300 ee gool dhaliyay 288 cayaarood oo uu u dheelay kooxda Real Madrid, tan io markii uu ka tagay Manchester United oo uu kaga wareegay £80m sanadkii 2009.
Ronaldo ayaa haatan ku jira kaalinta saddexaad ee kala horreynta goolasha ee kooxda Real Madrid, waxaana ka horreeya oo kaalinta koobaad ku jira ciyaaryahan Raul, oo 323 gool dhaliyay iyo Alfredo Di Stefano (307) dhaliyay.
Labadan ciyaaryahanba waa ay ka fariisteen kooxda Real Madrid.
Labada cayaartooy ee Raul iyo Di Stefano waxay 300 gool ku dhaliyeen kaddib markii ay ciyaareen 741 iyo 396 kulan.